भाउचर भनेको के हो? | अर्थव्यवस्था वित्त
यदि तपाईं लगानी र पैसाको संसारसँग नजिकको नजिक हुनुहुन्छ भने, यसमा कुनै श doubt्का छैन कि तपाईंले एक भन्दा बढी अवसरहरूमा सुनुवाइ भएको छ बन्धन भनेको के हो। यो एक हो लगानी को सबै भन्दा सामान्य रूपहरू बचतलाई लाभदायक बनाउन। यद्यपि यो एक धेरै साधारण उत्पादन होईन किनकि यससँग विभिन्न अनुप्रयोगहरू छन् जसलाई लगानीकर्ताले ज्ञात गर्दछ अधिक अनुभवको साथ वित्तीय बजारहरू। बोन्ड यो हो कि बन्धन धेरै हल्का ढ spoken्गले बोलेको छ, तर कहिलेकाहिँ यसको बचतको लगानी गर्ने यसको मेकानिकको बारेमा बढी स्पष्ट हुँदैन।
सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ कुनै विकल्प हुनेछ यो आर्थिक शब्द को सामान्य परिभाषा सन्दर्भ गर्न को लागी। ठिक छ, बन्धन सबै शक्तिशाली entण वित्तीय उपकरणहरू माथि छ जुन निजी र सरकारी दुवै संस्थाहरूले प्रयोग गर्छन्। बोन्ड भौतिकीकरण गर्नका लागि एक तरीका हो debtण, स्थिर वा भेरिएबल आय धितो। त्यसकारण, यो इक्विटी बजारबाट आउनु आवश्यक छैन किनकि केही साना र मध्यम लगानीकर्ताहरू यस समयमा विश्वास गर्छन्।
जे भए पनि, र ताकि तपाइँ यसलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, यो एक वित्तीय सम्पत्ति हो जुन बजारमा सूचीबद्ध छ र तपाइँ कुनै पनि समयमा सire्कलन सम्पत्तिहरूलाई लाभदायक बनाउनको लागि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। तर यसको अर्थ स indicates्केत गर्दछ कि यो बिभिन्न बजारबाट आउन सक्छ त्यसैले तपाईंसँग लगानी च्यानल गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। पेरिफेरल बन्डको खरीदबाट एक टोकरीमा बांड एक लगानी कोष मा एकीकृत। अवश्य पनि, यस समयमा तपाईसँग यस महत्वपूर्ण वित्तीय सम्पत्तिमा स्थिति खोल्नको लागि धेरै रणनीतिहरू छन्। सुरु बाट सोच्न सक्ने भन्दा बढि के तपाइँ सबैभन्दा धेरै आधारभूत र एकै समयमा प्रभावकारी केहि जान्न चाहानुहुन्छ?
1 बन्ड: राज्य द्वारा जारी
2 राज्य बन्धनहरू, सबैभन्दा परम्परागत
3 राष्ट्रिय बन्धनमा फर्कनुहोस्
4 अन्य देशहरूको सार्वभौम बन्धन
5 कर्पोरेट बन्धनहरू: अधिक नाफा
बन्ड: राज्य द्वारा जारी
यो लगानीको रूप हो जुन यस वित्तीय उत्पादनसँग बढी सम्बन्धित छ। प्राय: जहिले हामी बाँडहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, अवश्य हामी लगानीमा यस धेरै सार्वभौमिक मोडेलराइलाई स .्केत गर्दैनौं। अन्य प्राविधिक दृष्टिकोणहरू पछाडि र मौलिक पनि हुन सक्छ। ठिकै छ, एक bondण सुरक्षा हुन्छ जुन राज्य द्वारा जारी गर्न सकिन्छ (राष्ट्रिय, प्रान्तीय, नगरपालिका सरकारहरू, आदि)। यो सुविधाजनक छ कि तपाइँ यसलाई अब देखि याद छ, किनभने स्वायत्त समुदायहरू हाम्रो देश को पनि यो वित्तीय उत्पादन को जारीकर्ता हो। क्याटालोनिया, म्याड्रिड, अस्टुरियस, बास्क कन्ट्री, गलिसिया, ला रिओजा ...
यसको लगानीको रूप केही हदसम्म जटिल छ कि धितोको जोखिम बढ्दै जाने क्रममा यस वित्तीय उत्पादको नाफा बढ्छ। यद्यपि तपाइँ सबै पैसा गुमाउने जोखिम चलाउनुहुन्छ यदि जारीकर्ताले यसलाई तिर्न सक्दैन वा आफैलाई ईन्सोलिन्ट घोषित गर्दछ भने। यो एक मुख्य कारण हो किन क्षेत्रीय बन्धनमा उपज सधै समान हुँदैन। केहि धेरै महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरूसँग एक अर्कामा, यद्यपि सामान्य रूपमा तिनीहरू भित्र जान्छन् दायरा जुन १% बाट%% सम्म जान्छ लगभग जे भए पनि, लगानीको लागि वास्तविक विकल्प बन्ने जुन तपाईंसँग यो सटीक क्षणमा छ।
राज्य बन्धनहरू, सबैभन्दा परम्परागत
यसको विपरित, सरकारी बन्धन मध्ये एक हो बढी परम्परागत लगानी धेरै वर्ष देखि। बरु रूढीवादी वा बचावकर्ता प्रयोगकर्ता प्रोफाइलमा लक्षित, जसरी तपाईंको आमाबाबु वा हजुरबा हजुरआमले अन्य समयमा गर्नुभयो जब त्यहाँ वित्तीय उत्पादहरूको यति विविधता थिएन। यस अर्थमा, अवश्य पनि तपाईं यो कुरा बिर्सनुहुन्न कि मुद्दाको बन्धनको यस वर्गलाई विभिन्न परिपक्वता अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ। बाहिर खडा भएकाहरूमा ती dest, and र १० बर्षको लागि निश्चित हो र जुन सबै वित्तीय वर्षहरूमा केही नियमितताको साथ लिलामी हुन्छ। यद्यपि यो एक लगानी उत्पादन हो जुन हाल कम नफा कमाउँछ, १.%% भन्दा कम र यूरो क्षेत्रको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको नतीजाको रूपमा।
तथाकथित सरकारी बन्धनमा स्थिति लिन को एक ठूलो फाइदाहरू ती हुन् कि ती जटिल कुनै प्रक्रियाको हिस्सा हुन्। यो पनि धेरै सुरक्षित छ किनकि यसको मुनाफा शुरुदेखि नै ग्यारेन्टी गरिएको छ। यी सुविधाहरूको साथमा राष्ट्रिय बन्धनको चासो ती अग्रिम तपाइँको जाँच खातामा जानेछ। त्यो हो, एकै समयमा तपाइँले उनीहरूलाई सदस्यता लिनुभयो र अन्य प्रकारका वित्तीय वा बैंकि products उत्पादनहरूसँग विपरित हो कि तपाइँ उनीहरूलाई संकलन गर्न तिनीहरूको समयावधि समाप्त हुन पर्खनु पर्नेछ। उदाहरणका लागि अवधि जम्मा मा हुन्छ। यो एक यस्तो कारक हो जसले केही लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूका लागि अन्य लगानी मोडेलहरूको तुलनामा अप्ट इन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
राष्ट्रिय बन्धनमा फर्कनुहोस्
लगानीमा यो धेरै प्राथमिक उत्पाद द्वारा उत्पन्न ब्याज दरको सम्बन्धमा, यो आर्थिक चक्रमा निर्भर गर्दछ। यसको मतलब यो हो अवधिहरूमा जब ब्याज दरहरू कम हुन्छन्उदाहरण को लागी यस पल मा हुन्छ, यसको लाभदायकता तपाइँको व्यक्तिगत चासो को लागी स्पष्ट असंतोषजनक हुनेछ। जबकि यसको विपरित, अवधिहरूमा जहाँ प्रवृति पूर्ण रूपमा विपरित हुन्छ, तपाईंसँग यी मध्यस्थता मार्जिन सुधार गर्न थप अवसरहरू हुनेछन्। र यस तरिकाले, २%,%% वा%% प्राप्त गर्नुहोस्। यद्यपि हामी यस अवस्थाबाट धेरै टाढा छौं।
अर्कोतर्फ, यी सुविधाहरूको बन्धन २००० पछि असमान रूपमा विकसित भएको छ। थोरै पुगेको छ negative% मा नकारात्मक क्षेत्र मा लगभग हुन, जस्तो कि हालका वर्षहरुमा भइरहेको छ। जे होस् उनीहरूलाई काममा लिँदा यो ब्याज दर जुन तपाईंले तिनीहरूलाई लिलामी मार्फत जोड्नुभएको छ सँधै लागू हुनेछ। जे भए पनि, कुनै जोखिम लिनु बिना नै सानो नाफा प्राप्त गर्नु यो असम्बन्धित तरीका हो। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो तथाकथित राष्ट्रिय वा राज्य बन्धनको सब भन्दा सान्दर्भिक विशेषता हो।
अन्य देशहरूको सार्वभौम बन्धन
अवश्य पनि, तपाईं यी सुविधाहरूको बन्धहरू सब्सक्राइब गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ र कि ती अन्य राष्ट्रहरू वा भौगोलिक क्षेत्रहरूबाट आएका हुन्। उदाहरण को लागी, परिधीय बांडहरू जुन इटाली, ग्रीस वा पोर्तुगलबाट आउँदछ। तिनीहरू लाभदायकताको मामलामा सबैभन्दा लामो यात्राको साथ हुन्। तर जोखिमहरू विशाल छन् किनकि तिनीहरू अधिक अस्थिर अर्थव्यवस्थाबाट आएका छन् र तिनीहरूले अपरेसनहरूमा धेरै पैसा गुमाउन सक्छन् र निश्चित रूपमा तपाईले सुरूमै देख्नु भन्दा बढी। तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ कि जारी गर्ने देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ किनकि तपाइँ अबबाट एक भन्दा बढि अचम्म पाउन सक्नुहुनेछ।
यसको विपरित, सबैभन्दा सुरक्षित राष्ट्रिय बन्धन जर्मन हो र जुन बन्डको रूपमा परिचित छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यसले तपाईंलाई अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ जुन यसको अर्थतन्त्रको सॉलन्सीले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि यसको बदलामा यसको नाफा धेरै राष्ट्रिय बन्धनको यस विशेषताको कारणले उच्च हुँदैन। यस अर्थमा, अर्को आधारभूत उत्पादन संयुक्त राज्यको बन्धन हो र त्यो साना र मध्यम लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोको राम्रो हिस्सा हो। कि त तपाइँको सिधा खरीद मार्फत वा स्थिर आयमा आधारित लगानी कोष मार्फत।
कर्पोरेट बन्धनहरू: अधिक नाफा
यसको विपरित पक्ष तथाकथित कम्पनी बन्धनहरू वा अझ राम्ररी परिचित छन् कर्पोरेट रूपमा। स्थिर आय बजारमा यो ढाँचाले उनीहरूको नाफा सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, यद्यपि संचालनमा जोखिमको साथ। यस ढाँचामा interest% नजिक ब्याज लिन सजिलो छ। तिनीहरू कम्पनीहरूबाट आउँछन् र इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध गर्नु आवश्यक पर्दैन। यसको सब भन्दा सान्दर्भिक लाभहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईंसँग यी विशेषताको प्रस्तावहरूको विस्तृत श्रृंखला छ र यो राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय बन्धनहरू भन्दा माथि छ। व्यवसायका विभिन्न लाइनहरूका कम्पनीहरू बीच छनौट गर्न सक्षम हुँदै।
यस खण्ड भित्र, एक सबैभन्दा प्रतिनिधि बॉन्ड रूपान्तरण हुन्। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, ती ती हुन् जुन पहिले नै सेट गरिएको मूल्यमा नयाँ जारी गरिएको सेयरका लागि साटासाट गर्न सकिन्छ। यो परिवर्तनशील आय र निश्चित आयलाई मिलाउनको लागि एक मूल प्रस्ताव हो ताकि यस प्रकारको ब्याज दर जुन यस प्रकारको वित्तीय उत्पादनहरूले तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्दछ। हदसम्म कि नाफा पनि उच्च छ, अधिक जोखिमहरू तपाईं अधिक परिष्कृत लगानीको यस वर्गको साथ लिनुहुन्छ।
अन्तमा, तपाईं एक मोडलको बारेमा बिर्सनुहुन्न जुन भर्खरका वर्षहरूमा ठूलो प्रासंगिकता प्राप्त गरेको छ, जस्तै जंक बन्डहरू। एक प्रस्ताव को बिन्दु गर्न उच्च उपज उनीहरूलाई उच्च जोखिम सुरक्षाहरू मानिन्छ। तिनीहरूलाई अत्यधिक रूपमा भाँडामा लिन सिफारिस गरिएको हुँदैन किनकि उनीहरू मार्फत त्यहाँ तपाईंले धेरै कमाउन भन्दा पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ। तथाकथित स्थायी debtण बन्धनहरू जस्ता, जुन सबै मामिलाहरूमा प्रमुख पूंजीको फिर्ताको चिन्तन गर्दैन, बरु ब्याजको भुक्तानी अनिश्चित कालको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईले देख्नु भएको छ, त्यहाँ धेरै बन्डहरू छन् जुन वित्तीय बजारमा उपलब्ध छन्। सबै ढाँचा र प्रकृति को र यो निश्चित समय मा तपाईंको बचत लाभदायक बनाउन को लागी सेवा गर्न सक्छ। या त व्यक्तिगत रूपमा वा अन्य वित्तीय उत्पादनहरूको साथ संयोजनमा। यो प्रोफाईलमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं सँधै सानो र मध्यम लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बचतको लागि क्लासिक विकल्प मध्ये एकको रूपमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » भाउचर भनेको के हो?
मेरो सामाजिक सुरक्षा नम्बर के हो?
कहाँ राम्रो लगानी उत्पादन गर्न को लागी लगानी